अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव र लोकतन्त्र | Mechikali Daily
अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव र लोकतन्त्र
Posted By: रमेश पराजुलीon: १ आश्विन २०७७, बिहीबार १४:१७
विश्वको इतिहासमा अमेरिका विश्वको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक देश हो । यहाँको लोकतन्त्र करिब २०० वर्ष पुरानो छ । १८०४ मा यहाँ लोकतान्त्रिक विधिद्वारा चुनावको सुरुवात भएको थियो । यहाँ कार्यकारणी राष्ट्रपति हुन्छ ।
राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बन्नका लागि आधारभूत योग्यता राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पदको चुनाव लड़नको लागि ऊ जन्मजात अमेरिकी नागरिक हुनु पर्छ, त्यहाँको अंगीकृत नागरिक अमेरिकीको रास्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हुन पाउँदैन । उसको उमेर कमसेकम ३५ वर्ष हुनुपर्छ । उक्त व्यक्ति कम्तिमा १४ वर्षसम्म अमेरिकामा बसेको हुनुपर्छ ।
अमेरिकामा दुईवटा पार्टी (रिपब्लिकन र डेमोक्रेट्स) मात्र राजनीतिक अस्तित्वमा छन् । यी दुई पार्टीबाट एकएक जना व्यक्ति राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बन्छन् । नेपालमा जस्तो स्वतन्त्र वा जुनसुकै व्यक्ति आफ्नो मर्जीले राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न पाउँदैन । उही व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति पदको उम्मेदवार बन्न सक्छ, जुन व्यक्तिलाई त्यहाँका जनता तथा राजनीतिक पार्टीले चुन्छन् । पार्टीको उम्मेदवार चयन गर्नको लागि दुई प्रकारले चुनाव गरिन्छ । पहिलो प्राइमरी र दोस्रो काँकसस ।
प्राइमरीः प्राइमरी चुनावमा राज्य सरकार अन्तर्गत खुला या बन्द रूप गराइन्छ । यदि खुला रुपमा चुनेमा त्यहाका पार्टीका कार्यकर्ता र जनताले मतदान गर्छन् । यदि बन्द रूपमा चुनाव भए पार्टीका समर्थकहरुले मात्र मतदान गर्छन् ।
काकससः काकसस सिस्टममा चुनाव पार्टीका तरफबाट हुन्छ । यसमा पार्टीका समर्थक हरु एउटा ठाउँमा जम्मा हुन्छन् । फरक फरक मुद्दाहरुमा चर्चा परिचर्चा हुन्छन् । रास्ट्रपतिका सम्भव उम्मेदवारहरु सबैका कुरा सुन्छन् । तीमध्य् एक उम्मेदवारलाई हात उठाएर समर्थन दिन्छन् । तर यस्तो कमै राज्यमा हुनेगर्छ ।
राष्ट्रपति चुनाव र इलेक्टर
अमेरिकाका जनताले नम्बरको पहिलो सप्ताहमा राष्ट्रपति पदको लागि मतदान गर्छन् । यो मतदान सिधैँ उम्मेदवारको लागि हुँदैन । अमेरिकाका जनता पहिला स्थानीय निकायमा इलेक्टर चुनाव गर्छन्, तिनी इलेक्टरहरुले राष्ट्रपतिको चयन गर्छन् । यो समूहलाई इलेक्टोरल कालेज भनिन्छ, यस्मा ५३८ सदस्य हुन्छन । राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन्नको लागि २७० भन्दा अधिक इलेक्टरको आवश्यक हुन्छ । यसरी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ र सधैँ चारचार वर्षमा एकपटक २० जनवरीमा अमेरिका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पदको शपथ लिन्छन् । अमेरिकामा कार्यकारणी राष्ट्रपति हुन्छ ।
अमेरिकी संसद्मा पनि नेपाल जस्तै दुईवटा सदन हुन्छ । पहिलो प्रतिनिधिसभा जस्मा ४३५ सदस्य हुन्छन्, अर्को सदन सीनेट यस्मा १०० वटा सदस्य हुन्छन् । यस्तै अमेरिकाको ५१ औ राज्य कोलम्बियाबाट ३ सदस्य मिलयार संसद्को कुल संख्या ५३८ हुन्छ ।
अहिले सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक देश अमेरिकामा चुनाव हँुदै छ । अमेरिका चुनाव परिणाम के हुन्छ, यो आँकलन गर्न धेरै गाह्रो छ । २०१६ को अमेरिकी चुनाव धेरै कुराले इतिहासिक थियो । अमेरिकाको इतिहासमा पहिलोपटक महिला राष्ट्रपति बन्ने सुनौलो अवसरले अमेरिकी जनताले अस्वीकार गरे । एउटा ब्यापारिक पृष्ठभूमि भएका रंगीन आचरण र मानसिकता भएका डोनाल्ड ट्रम्पलाइ राष्ट्रपतिको रूपमा चुने । यस हिसाबले लोकतन्त्र जति नै पुरानो भएपनि महिलाका लागि त्यहाँ अझै कार्यकारी स्थानमा पुग्ने अवसर छैन । अमेरिकाभन्दा त नेपालकै लोकतन्त्र कैयन गुणामाथि छ भन्ने कुराको प्रमाणित भइसकेको छ ।
विश्वकैसब भन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक र सबभन्दा समृद्ध लोकतन्त्र भनिएको अमेरिकाका जनताले अहिले प्रश्न गर्न थालेका छन्–कतै अमेरिकाको लोकतन्त्र संकटमा परेको त होइन ? सत्ता प्राप्तिपछि, सत्तामा रहेका मानिसहरुको अधिनायकवादी सोच, लोकतंत्रको चौथो अंग मानिएको सञ्चारमाध्यमहरु पैसामा बिक्ने र, देशका मुट्टीभर पूजीपति उद्योगपतिहरुले पैसाको भरमा सरकारलाई आफ्नो व्यापारिक अनुकूलताको निर्णय गराउनु त्यहाँको लोकतन्त्र खतरामा परेको बुझ्नु हो ।
यौटा गम्भीर प्रश्न कभिड–१९ को महामारीको समयमा अमेरिकामा एक स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव हुनसक्छ ? यो सम्भावना छ, यदि मतदान हुलाक सेवाको प्रयोगले गरेमा यो मतदान सम्भव हुन्छ । अमेरिका जस्तो लोकतंत्रिक मुलुकमा हुलाकी सेवाबाट मतदान गर्न क ती सम्भव छ र यो मतदान कति निष्पक्ष हुन्छ भन्ने कुरा पनि गम्भीर प्रश्नको रूपमा आएका छन । यदि हुलाक सेवाबाट मतदान गर्नी हो भने हुलाक सेवा प्रदान गर्ने संरचनाको प्रमुख पदमा निष्पक्ष मानिसको नियुक्ति आवश्यक छ । तर, ट्रम्पले भने यसलाई पनि अस्वीकार गरेका छन् ।
अमेरिकाको आधुनिक राजनीतिकमा ट्रम्पलाई अधिनायकवादी राष्ट्रपतिको रूपमा हेरिएको छ । ट्रम्प अधिनायकवादी सोचभन्दा त्यहाको संबिधान र कर्मचारीतन्त्र सक्षम भएकोले अमेरिकी जनताहरु कम चिन्तित छन् तर लोकतंत्रिक पद्दतिलाई सुरक्षित गर्ने संस्थाहरु जस्तै न्यापालिका र कार्यन्वयन गर्ने संस्था कार्यपालिकाले त्यति आसाअनरूप काम गर्न नसकेको कुराले पनि लोकतन्त्र कमजोर भएको अनुभूती भएको छ ।
अमेरिकाको संविधानमा राष्ट्रपतिको अधिकारको बारेमा स्पष्टता नभएकोले ट्रम्पले आफ्नो अधिकारलाई दुरूपयोग गरेको अमेरिकी जनताले अनभूति गरेको प्रकट गरेका छन् । अमेरिकी लोकतंत्र पूर्णरूपले समाप्त हुने त छैन, तर ट्रम्प जस्तै अधिनायकवादी सोच भएका मानिसहरु सत्तामा रही रहेमा लोकतन्त्रका मुख्य स्तम्भहरु कार्यपालिका, न्यापालिका र मीडियाहरुलाई आफ्नो परिधिभित्र राख्नेछन् । लोकतन्त्रको लागि अनकुलता प्रतिकूलता भन्दा पनि आफ्नो र आफ्नो पार्टीको अनकूलताअनरूप ती संस्थाहरुलाइ प्रयोग गर्नेछन् । जसको परिणाम लोकतन्त्र सधै खतरमा रहने छ । बिश्वको सबभन्दा ठूलो, पुरानो र समृद्ध लोकतान्त्रिक मुलुक अमेरिका माजसरी लोकतन्त्र समृद्ध रूप स्थापित हुनुपर्ने थियो, त्यहीअनरूप त्यहाँ लोकतन्त्र स्थापित भएको छैन । अझ पनि त्यहाँ अल्प संख्यकहरुले आफूलाई असुरक्षित महसुस गरेका छन् ।
अमेरिका जस्तो समृद्ध लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि नस्लभेदको आधारमा चुनाव जित्नु, नस्लभेदलाई मुख्या मुद्दा बनाएर चुनाव लड्नु यो लोकतन्त्रको लागि राम्रो संकेत होइन । अब अमेरिकालगायत विश्वमा लोकतन्त्रलाई समृद्ध र स्थापित बनाउनु छ भने जनताले मौलिक अधिकार, समनता र समान अधिकारको लागि आवाज उठाउनु आवश्यक छ । नस्लभेद, लिंगभेद र धार्मिक सापेक्षता र कट्टरता विरुद्ध आवाज उठाएर, धर्मनिरपेक्षता वर्ग समनता कायम गर्न सकेमात्र लोकतन्त्र समृद्ध र मजबूत हुन सक्छ ।